DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha Isniintii 15 April 2019 - Afrika - TELES RELAY
ACCUEIL » DIB U EEGID AFRICAN PRESS »DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha Isniintii 15 April 2019 - Afrika
DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha Isniintii 15 April 2019 - Afrika
- Wargeysyo dhowr ah oo la daabacay subaxnimadii hore ee Kinshasa ayaa diiradda saarey nabadgelyo-xumada ka jirta gobolka Lubumbashi iyo Goma. Si loo xusho ka qayb-qaadashadiisa, madaxweynaha gobolka, Felix Tshisekedi ayaa go'aansaday inuu u wareego labada magaalo.
Awoodda, oo ka hadlaysa nabadgelyo darrada ka jirta Lubumbashi iyo Goma, oo magaciisu yahay A "Félix Tshisekedi firefighter". Wargeyska maalinlaha ah ee Kongo-Central waxa uu tilmaamayaa in Lubumbashi, caasimadda gobolka Upper Katanga, iyo Goma, oo ah caasimadda Waqooyiga Kivu, amni-darradu aad ayay u sii socotaa. Muwaadiniinta muwaadiniinta ah ee Congolese ayaa lagu dilay guud ahaan jahwareerka. Si uu u calaamadeeyo ka qaybgalka, madaxweynaha gobolka, Felix Tshisekedi ayaa go'aansaday inuu u wareego labada magaalo iyada oo gacmihiisa ku dhegan yahay nabadda.
Gudaha Lubumbashi, wuxuu Sabtidii hore qabtay kulankii Golaha Ammaanka ee Sare, isagoo raacay tallaabooyin deg-deg ah oo lagu soo celinayo xasilloonida caasimadda. Go'aamo isku mid ah, ayuu Axaddii ku dhuftay Goma, waqooyiga Kivu, ayaa warisay wargeyska.
MUSTAQBADEED: "Lubumbashi, Kasumbalesa, Goma iyo Beni, Kaisekedi waxay wax ka qabataa amni-darro". Qoraalkan ayaa lagu sheegay in Golaha Ammaanka ee Sare uu Sabtidii ku kulmay magaalada Lubumbashi, go'aamiyay in la xakameeyo xakamaynta askarta booliska, militariga iyo walxaha ilaalinta Jamhuuriyadda ee ilaaliyaha iyo shirkadaha macdanta ee dhammaantood qiyaasta dhulka
Ka dib markii uu xilka ka dagay Kasumaayadii, ka dib markii uu socday fadhigii shaqada, madaxa fulinta qaranka ayaa tilmaam cad iyo cad cad la yeeshay madaxda qaybaha muhiimka ah ee ku lugta lahaa maareynta xuduudda xuduudka ee su'aasha. ayaa la siiyay si loo soo celiyo amar galka canshuurta labaad ee waddanka, ka dib dekedda Matadi.
Xoghayaha AFRICA ayaa sidoo kale xusay in Lubumbashi, Tshisekedi oo wax ka qabta amni-darrada. Saddex usbuuc ayaa qoray in Golaha Sare ee Gaashaanku uu go'aankaasi qaatay Sabtidii 13 April ee Lubumbashi ka dib markii uu shir guddoomiyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Felix Antoine Tshisekedi. Sababta: waxaa jiray khasaare la ogaan karo oo ku saabsan kormeerka ciidamada booliska iyo ciidamadda oo la sii daayay in la xakameeyo ilaaliyayaasha amniga iyo shirkadaha macdanta, iyo la'aanta hababka saadka, marka la eego iftiinka warbixinta la soo bandhigay by Kormeeraha Guud ee Ciidanka Qalabka ee Rd-Congo xaaladda ammaanka ee magaalada Lubumbashi iyo hareeraheeda. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtey ilo-wareed, Lubumbashi, madaxa dawladda, ayaa qaatay luqadda la socota tallaabooyinka ay qaadeen golaha Difaaca intaanay u duulin Goma ee Waqooyiga Kivu.
AS FORUM waxa kale oo uu ku faafay doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenka gobolka Sankuru maanta, Golaha Shacabka iyo Golaha sare ee Garsoorka. Sida laga soo xigtay wargeyska, oo ku saleysan xogta la helay shalay, qoraal ahaan, xaruntii doorashadu waxa ay u beddeshay meesha ay kudhacday codka. Tani mar dambe ma dhici doonto xarunta dhexe ee Golaha Gobolka Sankuru. Halkii, xoghaynta fulinta gobolka ee Ceni ee Lusambo. Isbeddelkan ku yimid goobta codeeynta ayaa ah sababo nabadgelyo leh, isagoo caddeeyay ilaha dhow ee Ceni.
Si kastaba ha ahaatee, waxay wargelinaysaa shaxda, Golaha Dawladda iyo Guddiga Sare ee Garsoorka ayaa si gooni ah u qaybsan. Labada dhismood ayaa ku dhacay musharaxnimadii Joseph Mukumadi, oo ku ansaxiyay Maxkamadda Racfaanka ee Lusambo iyada oo aan laga helin jinsiyada Congolese, laakiin ay ansixiyeen Golaha Guurtida.
Maalmahani waxay sidoo kale ka hadlaan xakameynta farsamada, oggolaanshaha gaadiidka, vignette, labadii bilood ee roonaanta la siiyay darawaliinta. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay Axadda, April 14, oo ay ka socoto raadiyaha gaarka loo leeyahay ee Top Congo FM, oo ay qabteen Forum Des As. Dib-u-soo-celinta khasabka ah ee shahaadada farsamada faahfaahsan ayaa ku dhawaaqday talaadadii la soo dhaafay oo la hakiyay waxaana la siiyay labo bilood oo ah raristaris.
Gisèle Mbuyi / MMC
(GM / Haa)
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore WADARADDA DIGITAL
DRC: Friday Press Review 12 April 2019 - Afrika
DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha Talaadadii 16 April 2019 - Afrika